Zingtụnanya New Email Design (Mkpa) | Martech Zone
Nke a bụ ozi email ọzọ m hụrụ n'anya, mana anaghị m eme ihe ọ bụla! Nke a bụ Ogbe ndịda Indianapolis, Amazingly New Email.
M na-anọ na ụtụ n'ihi na m nwere olileanya na a ọhụrụ imewe-abịa pụta - ozi na- kwalite ogbe ndịda Indianapolis dị ebe niile, mana imepụta ahụ na-eme ka email ahụ ghara ịgụta agagharị ma ghara iji ya rụọ ọrụ. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Enweghị isi njikọ na isi ozi na ezigbo weebụsaịtị maka Indy Ogbe Inc. Ma eleghị anya, nke ahụ bụ nlekọta, mana m chere na ọ chọrọ ya n'ezie.
Ihe onyonyo di na nkụnye eji isi mee bụ obere na abaghị uru - enweghị m ike ịmepụ ha. Ihe m chere bụ na onye ọ bụla rụpụtara email ahụ nwere obere mkpebi karịa nke m na-eme, yabụ na ọ ga-adị ha ka ibu. Ha na-ewere ohere bara uru 'n'elu ogige atụrụ'… ohere nke ndị mmadụ n'ezie nwere ike hụ mgbe ha mepere email na onye ahịa ha.
Paragraf mbụ na aka ekpe, Okwu sitere na IDI, bụ aha dara ogbenye na nke na-adịghị mma. Eleghi anya ndi bekee amaghi ihe IDI bu?
Mpempe akwụkwọ ahụ pere mpe, enweghị ike ịgụ, ma enweghị mpempe akwụkwọ paragraf ma ọ bụ mgbọ iji mee ka anya m belata ihe dị na ya. N'ihi ya, agụghị m ya! Ihe oyiyi ahụ bụ oke oku, n'agbanyeghị!
Kalenda ihe ndị a nwere ike ịbụ ihe kacha mma gbasara email a, mana enweghị oku ịkpọ ihe na ihe ndị ahụ… nye m njikọ iji zụta tiketi ma nweta ozi ndị ọzọ na mmemme ọ bụla ka m nwee ike ịga! Agaghị m ahụ ihe omume ebe a wee gaa gbalịa ịchọ ya na Google. Enweghị m oge maka nke ahụ!
A na-akụri ọdịnaya ma banye n'ime ogidi ndị na-enweghị isi. Ndị mmadụ nọ na nnukwu anya Monitors ugbu a na wider amuma… kwaga 800 ka 1000 pixel obosara usoro. Ebe kalenda gị bụ akụkụ dị n'akụkụ aka nri, onye ọrụ agaghị echegharị na ịpịgharịrị iji ruo n'akụkụ ahụ wee gụọ ya.
maka ole na ole
okwu na ọ bụ
n'ezie siri ike
Okwesiri inwe ma ọ dịkarịa ala otu oku na-enweghị ike ime ihe na email. Chọrọ ka m gaa na Ahịa Obodo? Zụta tiketi egwu nkiri? Nye m otu ọkpụkpọ pụrụ iche ka emee ihe karịa ịhọrọ 40. Gwa m karịa otu ihe karịa ndị ọzọ niile ga-ebuga m ebe ahụ.
Tinye peeji nke ọdịda na edemede ma ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere ime ụlọ. Dee ihe nkpirisi nkpirisi ederede nwere njikọ na 'akụkọ zuru ezu' nke na-ewetara m na peeji nke nwere ụlọ iku ume na ozi ndị ọzọ.
Ebee ka eserese ndị mmadụ dị? Enweghị m foto ndị mmadụ na-amụmụ ọnụ ọchị na email a na-eme ka ọ dị m ka m na-agụ broshuọ ma ọ bụ akụkọ akụkọ. Foto nke ndị mmadụ na-anụ ụtọ ihe omume ndị a na ọnọdụ ha na obodo Indy ga-ejikọ m.
Kedu ihe mere n'izu gara aga? Kedụ banyere nnukwu recap nke mmemme ma ọ bụ azụmaahịa ị kwalitere na email ya na ụfọdụ ihe ndị na - agụ ya kwuru gbasara oge dị egwu ha nwere. Mee ya nkeonwe!
Ihe m na-ekwu abụghị ka slam email a. Dị ka m kwuru, ọ juru na nnukwu ozi… ikekwe nke ukwuu! O doro anya na ndị dere ederede ahụ mere ihe omume ụlọ akwụkwọ ha - ọ chọrọ naanị ngosi dị mma ka ndị na-agụ ya wee rie ma mee ya.
Tags: adwords mma akaragoogle adwords mma akarahtaccessnjikarịcha logonkọwapụta mkpanakaabụghị wwwakara ogoSocial Media Marketingnjikarịcha weebụsaịtịwww
Ọ bụrụ na m bụ ndị nrụpụta / ode akwụkwọ ozi email, m ga - agbagha gbue oyiri site na ọkara 1/2. Can nwere ike jikọta isiokwu ụfọdụ na ibe ọdịnaya nke ọdịnaya.
Zọ ọtụtụ nnomi maka email.